Ampidino AVG VPN 1.12.841 ho an'ny Windows
Sehatra: Windows Version: 1.12.841 Fiteny: English
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (20.90 MB)
Ampidino AVG VPN,
AVG Secure VPN dia rindrambaiko VPN maimaimpoana ho anny Windows PC (solosaina). Ampidiro izao ny AVG VPN hiarovana ny tambajotra WiFi anao ary hijerena an-tsokosoko. AVG Secure VPN na AVG VPN dia programa VPN maimaimpoana atolotra anny Windows PC, solosaina Mac, telefaona Android ary mpampiasa iPhone.
Mba hiarovana ny tamba-jotra WiFi anao ary hijerena manokana ny Internet, kitiho ny bokotra AVG VPN Download eo ambony etsy ambony mba hisintomana ny programa VPN aminny solosainao. Azonao atao ny manandrana ny fiasa rehetra aminny serivisy VPN maimaimpoana mandritra ny 7 andro.
Sintomy ny AVG Secure VPN
Ny programa VPN dia manolotra fiarovana aminny tambajotra WiFi rehetra na aiza na aiza alehanao.
Izy io dia miaro anao aminny tambajotra WiFi an-trano sy ampahibemaso, na mizaha Internet na manao fifanakalozana banky ianao. Ny serivisy VPN dia mitazona ny asanao an-tserasera tsy miankina ihany koa. Aminny alàlanny fanomezana fifandraisana voafafa dia manome antoka fa ny mpifanila vodirindrina aminao, mpijirika, mpanome tolotra internet ary na ny fikambanana ofisialy aza tsy mahita izay ataonao aminny Internet.
Ny fampiharana VPN dia manome anao fidirana tsy voafetra manerantany. Mamela anao hisafidy firenena avy aminny lisitry ny mpizara iraisam-pirenena tsy fantatra anarana ary mizaha ary miditra aminny atiny toy ny hoe teo ianao. Ny lozisialy AVGs VPN dia miavaka miaraka aminireto endri-javatra manaraka ireto:
Serivisy VPN tsotra sy mahery: misintona ary mametraha VPN ary miarova fifandraisana azo antoka aminny tsindrio bokotra iray.
Fampiharana ambaratonga miaramila: Ny haavonny fanaingoana aminny fenitra 256-bit AES dia miaro ny fifanakalozana eo aminny Internet aminny masonao.
Toerana 50 mahery hisafidianana: Ireo mpizara fampielezam-peo natokana dia manampy anao hanalavitra ireo seho tianao indrindra mandritra ny dia ataonao.
Azo ampiasaina aminny fitaovana 5 miaraka miaraka: ity VPN ity dia azo ampiasaina aminny fitaovana maro hafa ankoatry ny solo-sainao Windows: Azonao atao koa ny mampiasa azy aminny fitaovana Mac, Android ary iOS.
Antoka miverina aminny vola 30 andro: Andramo aloha, tsy misy risika; Raha tsy afa-po ianao dia haverina ny volanao. Tsy misy olana, tsy misy kofehy mifamatotra.
AVG Secure VPN (AVG VPN) dia mora ampiasaina; Mahazo fifandraisana VPN ianao aminny dingana telo monja:
Mifandraisa aminny tambajotra WiFi tadiavinao: Ao an-trano, miasa, sekoly, cafe, seranam-piaramanidina na fivarotana - Miasa na aiza na aiza ny rindrambaiko AVG.
Alefaso ny VPN azo antoka: Atombohy Secure VPN ary kitiho ny bokotra Open. Afaka misafidy toerana hafa ianao aminny fotoana rehetra.
Mizaha am-pilaminana sy tsy mitonona anarana: Fizahana tsy fantatra anarana, fanafenana adiresy IP, fanafenana ny toerana, ao anaty tsindry iray monja!
Haben'ny rakitra: 20.90 MB